रामलिला फर्जी टिकट प्रकरण: फेला परेको फर्जी टिकटको दोषी को ? - Top Nepal News
रामलिला फर्जी टिकट प्रकरण: फेला परेको फर्जी टिकटको दोषी को ?
कार्तिक ९, २०७३ मा प्रकाशित
Published at 2016-10-25
पप्पु गुरुङ्ग- २५ गते रामलिला समितिलाई फर्जी टिकट छापिएको बिषयमा जानकारी हुदा हुदै दोषीलाई पक्राउ गरि सामाजिक कठघरामा ल्याउन नसक्नु पनि समितिको कायरता हो । दोधारा चाँदनीमा संचालित रामलिला नाट्य मञ्चनमा कुर्ची बिक्रीको फर्जी टिकट प्रकरणले बिबाद निम्त्याएको छ् । सामाजिक सदभाव कायम राख्न संचालनमा आएका श्री आदर्श रामलिला नाट्य मञ्चनले सदभाव कायम राख्न सन्दर्भमा कुरै छाडौ, हातपात तथा गाली गलौच र आपसी बैमश्यता श्रजना गरेको छ् ।
फर्जी टिकट प्रकरणले चाडै राजनितिक मोड समात्ला भन्ने बिषय करिब निश्चित भएको छ् । स्थानियहरुले रामलिलामा देखा परेको फर्जी टिकटको न्यायीक जाँच सहित दोषीलाई समाजको अघि नङ्गयाउनु पर्ने माँग राख्दै आएका छन् । रामलिला समितिको आपसमा फर्जी टिकटको आपसी आरोप तथा प्रत्यारोप छ् ।
टिकट काउण्टरबाट फर्जी टिकट बिक्रि भएको एक थरी समिति सदस्यहरुको दाबी छ भने अर्को थरिको सदस्यले फसाउन फर्जी टिकट योजनाबद्ध मैदानमा छरिएको भन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनिहरु कसै संग फ्याक्ट प्रमाण चाही नभएको अवस्था छ ।
२५ गते रामलिला समितिका अध्यक्ष छबिलला भण्डारीले काउण्टरबाट टिकट काट्दै गरेको देखेको भन्ने दाबी छ् । तर त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्षले रङ्गेहात अबैध कार्य गर्दै गरेको अवस्थामा किन समात्न अध्यक्ष लगाएत समिति टोली सक्षम भएनन् अर्को प्रश्न उब्जाएको छ ।
कसै संग स्पष्ट प्रमाण नभएको अवस्थामा स्थानिय प्रशासन, राजनितिक दल, नागरिक समाज तथा पत्रकारले न्यायीक जाँच गरि दोषी पत्ता लगाउन आवश्यक भएको आवाज समेत उठ्न थालेको छ ।
धार्मीक कार्यमा समेत यस्तो उदण्ड हरकतले समाजमा असमाजिक तत्व मौलाएको प्रष्ट भएको छ् । गत वर्ष देखि युवाहरुको जमातले गरेको कठिन परिश्रम तथा योगदान बाबजुत १८ वर्ष पछि दोस्रो पटक दोधारा चा“दनीमा रामलिला हेर्ने मौका पाईएको छ ।
पराम्परा तथा पर्वको रुपमा मानिदै आएको दोधारा चाँदनीमा संचालन हुदै गर्ने रामलिलाको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेको एक थरीको भनाई रहेको छ् । सबैको साझा सहयोग तथा धर्म प्रति सकारात्मक नतिजा स्वरुप यस वर्ष पनि राम्रै तरिकाबाट रामलिला मञ्चन गरिएको हो ।
भारतको खटिमा शहरको ईष्टदेब प्रिन्टिङ्ग प्रेसमा फर्जी टिकट छापिएको निश्चित रहेको समितिका अध्यक्षको दाबी छ् । १० ठेली अथवा १ हजार टिकट छापिएको छ । २५ गते रामलिला समितिलाई फर्जी टिकट छापिएको बिषयमा जानकारी हुदा हुदै दोषीलाई पक्राउ गरि सामजिक कठघरामा ल्याउन नसक्नु पनि समितिको कायरता हो ।
समाजमा रहेका त्यस्ता अनैतिक कृयाकलाप गर्ने जो कोहीलाई समाजमा उभ्याउन नसक्नु्को अर्थ आम जनताले के बुझ्ने रु अब आम जनतालाई गुमराहमा राख्न पाईदैन् । सत्य तथा यर्थात सबैको सामु ल्याउनै पर्छ । समाजमा हुने यस्ता बिकृतीलाई सबै मिलेर नाङ्गो बनाउनुको साटो रामलिला समितिले गरेको ढाकछोपको नतिजा अहिले आएर गम्भिर मोडमा आएर खडा भएको छ ।
अहिले आएर रामलिला समितिका सदस्यहरु सामाजिक संजालमा एक आपसमा छड्के पारामा कबिता तथा स्टाटसले लेख्न थालेका छन् । सामजिक संजालमा कबिता शैलीमा लेखिएको स्टाट्स लेख्नु भन्दा दोषी पत्ता लगाएर समाजको सामु उभ्याउन रामलिला समितिको अहिले आएर अहंम कर्तब्य हुन आउछ् । समितिले फर्जी टिकटको बारेमा मात्र छानबिन नगरेर बिगतमा भएका रामलिला सम्बद्ध खिचातानी र राजनितिकरणको बारेमा मुल्याङ्कन तथा समिक्षा गर्नु जरुरी छ् ।
समाज बिथोल्न तथा आपसी सदभाव बिथोल्न दोधारा चादनीमा रामलिलामा आम जनताले सहयोग रकम दिएका हैन् । समाजलाई कार्टुन बनाएर रमाउनेहरुको जमात देखिन थालेको छ् । रामलिला जस्तो पबित्र कार्यमा समेत बिगतका दिनहरु देखि मनमुटाव पक्षपात मौलाएको सबैमा सर्बबिदितै छ् । धार्मिक कार्यमा पक्षपात, बैमश्या, असमानतालाई समाप्त गर्न समाजले एक थरीको लडाई लड्नु पर्ने आवश्यक भएको छ् । समाजलाई बैमश्याबाट सदभाव तथा भाईचारामा रुपान्तरण गरि उदाहरणिय समाज निर्माणका लागी नाट्य मञ्चनमा सहयोगको हात बढाएका हुन् ।
समाजमा अस्थिरता, कानुनी राज्यको उपहास गर्ने कार्य जो कोहीले गर्छ उसले समाजमा नाङ्गो उभ्याउनु आवश्यक छ् । दोधारा चा“दनीको रामलिला नाट्य मञ्चनको सबै एकै ताप्कामा बसेर न्यायीक छानबिन गर्नु पर्छ । एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपले समाजलाई गलत दिशातिर डोर्याउने निश्चित हुन्छ ।
अहिले पनि फर्जी टिकटको बिषयलाई लिएर केही अराजक तत्वहरुले आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्न सक्ने अवस्था छ् भएका प्रमाण मेटाएर फसाउने रणनिति गर्ने गनथान पनि बजारमा चलेकै अवस्था छ् । सबै रानितिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, रामलिला समिति, स्थानिय तथा स्थानिय प्रशासन एक ढिक्का भएर फर्जी टिकटको बारे न्यायिक छानबिनमा सयोग गर्नु आवश्यक रहेको दखिन्छ् ।